I-Mashiro No Oto Isizini 2 Usuku Lokukhishwa: Esikwaziyo Kuze kube manje Ngalolu chungechunge! - Ukuzijabulisa
I-Mashiro No Oto Isizini 2 Usuku Lokukhishwa: Esikwaziyo Kuze kube manje Ngalolu chungechunge!
Uma umculo ku-anime uyinkomba, amathuba esakhiwo avulekayo lapho ehlanganiswa nale nto ebonakala ijabulisa cishe ayinamkhawulo. I-Mashiro no-Oto, eyaziwa nangokuthi Lawo manothi amhlophe eqhwa, ingenye ye-anime enjalo. Konke lokhu kumayelana nensimbi yomculo yendabuko yaseShayina eyaziwa ngokuthi i-sinashen, futhi iveza kahle ukuthi okuwukuphela komculo umuntu awuzwayo ekuphileni kwakhe kwansuku zonke ukuhlokoma kwezimoto ezidlulayo kanye nokuhlokoma kwedolobha.
Ngosizo lwe-sinashen, i-anime iyakwazi ukudlulisa izinhlamvu ezinamandla nezizwelayo ngesitayela sokugqwayiza esibandakanyayo, okwenza kube okufanele kubonwe.
U-Marimo Ragawa ungumbhali nomdwebi wochungechunge lwamanga olusebenza njengogqozi lwalo mdlalo. Kubafundi baseJapane, yanyatheliswa yi-Kodansha, kanti kubafundi besiNgisi, yanyatheliswa yi-Kodansha USA eshicileleni lanyanga zonke le-shonen.
Kuze kube muva nje, bekungakaze kube namagama asemthethweni avela kunoma yimuphi wabakhiqizi bomdlalo ukuthi isizini izovuselelwa. Abantu abaningi bacabange ukuthi lo mdlalo uzokhishwa ngo-2022, kodwa abakwazanga ukuhlinzeka ngobufakazi obuphathekayo bokusekela lokho abakushoyo.
Ngakho-ke, umbuzo ovuthayo ezindebeni zawo wonke umuntu uwukuthi: Ingabe kuzoba nokulandelana? Uma kunjalo, singabheka ngabomvu nini ukuyibona?
Impendulo yalo mbuzo incike ezimweni ezihlukahlukene, okuhlanganisa umbono jikelele wombukiso, ukutholakala kokuqukethwe, uma kunenzuzo, ukuthandwa kwayo, njalonjalo.
Ishicilelwe okokuqala ngoDisemba 5, 2009, i-manga ayikaqedwa. Kuye kwahlanganiswa imiqulu ye-tangobon engamashumi amabili nesikhombisa. I-Shin-Ei Animation inomsebenzi omningi ongasebenza ngayo njengoba kwaguqulwa imiqulu yokuqala eyisishiyagalombili kuphela ye-manga.
UMashiro No Oto Isizini 2
Lena enye yezindlela ezilula futhi ezisebenza kahle kakhulu zokuhlola ikusasa lombukiso. UMashiro no-Oto unamaphuzu angaphezu kwesilinganiso esingu-7.6 ku-MyAnineList kanye nesilinganiso se-IMBD esingu-7.5.
I-Disc Scales kanye ne-Manga
I-anime isebenza njengethuluzi lokumaketha lezinto zoqobo. Uma i-anime idume kakhulu, abantu abaningi bazoshesha ukuthenga i-manga yayo esitolo sendawo samabhuku amahlaya. Sekudayiswe amakhophi alo mbukiso angaphezu kwezinkulungwane ezi-100, okwenza amakhophi ayizigidi ezimbili esewonke. Kumashadi okuthengisa e-Amazon kanye ne-Oricon, ikhuphuke yaba yi-10 ephezulu.
Uma kubonakala ngokombono wembulunga yonke, ukuthengiswa kwediski akunamthelela omncane, nokho ukuthengisa izidlali ze-Blu-ray/DVD kungaletha enye imali eyengeziwe. Kwadayiswa amakhophi angu-3000, okuhle kodwa akwethusi ngoba ashoda ku-4000 mark.
Inqwaba yezindondo ihlonishwe kulolu hlelo emikhakheni eyahlukene. Indondo ye-Kodansha Manga yesi-36 yanikezwa yona ngokuba i-shonen manga ehamba phambili. Ngenxa yalokho, iqokelwe umklomelo we-2019 Tezuka Osuma Cultural futhi yazuza umklomelo wokwenza kahle kuma-Jaoan Media Art Festival Awards ngo-2018.
I-anime iwuhlelo olusha, futhi akuvamile ukuthi isizini yesibili imenyezelwe maduze nje ngaphandle uma abadali bohlelo bebehlela ukwenza isizini engaphezu kweyodwa yohlelo kusukela ekuqaleni, ngakho-ke kuphephile ukucabanga ukuthi uhlelo luzovuselelwa isizini yesibili.
Inzuzo yonke esisanda kuyijabulela isho ukuthi kungathatha i-anime omunye unyaka noma emibili ukuthi ikhishwe ngokusemthethweni.
Ngakolunye uhlangothi, i-anime inoHiroaki Akagi noKanichi Tako njengomqondisi nomlobi wayo. I-Shin-Ei Animation yinkampani enesibopho salo msebenzi omangalisayo wobuciko bopopayi. Iziqephu ezingu-12 seziphelele zasakazwa phakathi kuka-April 3, 2021, noJuni 19, 2021, abalandeli abazizwa ‘zizifushane kakhulu ukuba zanele.’
Umdlali waseshanasen, uSetsu Shiwamura, unquma ukushiya idolobha lakubo ngemuva kokulahlekelwa umkhulu wakhe, umdlali wodumo lwensimbi, owashona eminyakeni embalwa edlule. UShinasen akasenaso isithakazelo kuye ngemva kokuthuthela eTokyo ngenxa yomsindo oqhubekayo wedolobha, futhi uphelelwa isithakazelo ngokushesha sokuwudlala ngemva kokuzwa amazwi kamkhulu wakhe ashukumisayo ukuba aphishekele isitayela sakhe siqu.
I-Spy X Family Anime: Usuku Lokukhishwa: Ukusakaza, Ama-trailer nezibuyekezo zango-2022!
I-Adachi kuya ku-Shimamura Isizini 2: Usuku Lokukhishwa, Isakhiwo, Izinhlamvu | Ulwazi Oluphelele!
I-Osamake Isizini 2: Usuku Lokukhishwa: Konke Odinga Ukukwazi Ngalolu chungechunge ngo-2022!
I-Umesono Academy ekugcineni imbhalisa, futhi kufanele asebenze ukuvuselela uthando lwakhe lwe-shimasen.
Intombi kaCharlie Puth: Konke Odinga Ukukwazi Ngobudlelwano Bakhe!
Konke Mayelana Ngicabanga ukuthi Kufanele Uhambe noTim Robinson Isizini 2?